Ukujongwa kwe-UFO: Iindawo eziPhambili ukuBamba into engaziwayo yokubhabha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ukujongwa kwe-UFO: Iindawo eziPhambili ukuBamba into engaziwayo yokubhabha
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseChile zokuPhula • Iindaba zase China eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Mhlawumbi ukuba nexesha elininzi ekhaya ngenxa ye-COVID-19 kusinike ixesha elingaphezulu lokujonga phezulu esibhakabhakeni kwaye sibone… iiUFOs. Okanye ngaba ngenene kukho ukubonwa kweUFO ngakumbi kunangaphambili?
Ngokwe-global.com, bekukho ngaphezulu kwe-1,000 2020 yokubona i-UFO ngo-7,200 (malunga ne-2019 yabo) kunango-XNUMX.
Ngaba iifowuni ezineekhamera ezakhelweyo zenze kwalula ukubamba into engaziwayo esibhakabhakeni? Imifanekiso ayifanelanga ukuba yeyokugweba okuhle kuyo yonke imifanekiso yangaphambili.
Ngaba ubuya ngabom uye kwindawo eyaziwa ngokuba kukubonwa kweUFO okanye ubuya kwenza ngokuchaseneyo uhlale kude?
Kukho uninzi olunomdla olunomdla kwizinto ezingaziwayo zokuhamba ngenqwelomoya, kwaye uhambo oluya kwindawo eyaziwa ngokuba kukubona liholide elenzelwe uku-odolwa. Ukuba ungomnye wabo banethemba ukudibana kohlobo lwesithathu, Nazi ezinye iindawo zokubeka uluhlu lwabazingeli beUFO.
Indawo 51, Nevada
Ukusuka kwiithiyori ezintsha zelenqe ukuya kwiminyhadala ye-Facebook ebongoza abantu ukuba babalekele kwisiseko, i-Area 51 ihlala ikwiindaba. Ukufakwa emkhosini e-US, okufumaneka phantse kwi-160 km kumantla eLas Vegas, yindawo eqhelekileyo yeengcali zelenqe. Ithiyori kunye neencwadi zabaphandi kunye nabangaphakathi kurhulumente bathi le ndawo yindawo yokugcina izixhobo zasemzini ezichaphazelekileyo kubandakanya nabahlali, abaphilayo nabafileyo, kunye nezinto ezifunyenwe eRoswell. Abanye bade bakholelwe ukuba indawo isetyenziselwa ukwenza iinqwelomoya ngokusekwe kubuchwephesha bobuchwephesha. Abanye be-UFOlogists bathi indawo efihliweyo esandula kufunyanwa phantsi komhlaba kwisiseko sePapoose Mountains eNevada kulapho kugcinwa khona izinto ezingaphandle komhlaba kwaye zingasekho kwiNgingqi 51. Nokuba ngaba inabaphambukeli okanye akunjalo kuyathethwa, zihlelwe. Iindwendwe zinokuqhuba ngohola wendlela wombuso apha onophawu "lwaselwandle." Izaliswe ngamashishini angabaphambukeli kwindlela yentlango. Khumbula ukujonga phezulu ukuba ulapha ebusuku. Ingaba ngumhla wakho onethamsanqa, okanye ubusuku busuku.
IRoswell, eNew Mexico
Inqanawa yomama yazo zonke iindawo zeUFO, le ndawo idume ngesehlo seRoswell esenzeka ngoJulayi ka-1947. ). Ukusukela ngoko, izithiyori zelenqe ziye zabanga intsalela yesosi ephaphazelayo, kunye nabaphambukeli abafileyo, bagcinwa ngokufihlakeleyo apha. Le ndawo likhaya kwiRoswell Spacewalk kunye neZiko loLondolozo lweMbali le-UFO kunye neZiko loPhando kunye neRoswell Museum kunye neZiko lobuGcisa, bonke bathontelana ngabantu abathanda indawo. Ukubeka i-UFO yokwenyani apha kunokuba nzima, kodwa ukuya esixekweni kumnyhadala weRoswell UFO obanjwe rhoqo nge-XNUMX kaJulayi kwimpelaveki ukubhiyozela zonke izinto zangaphandle kunye nabanye abalandeli. Amawaka amawaka enxibe iimpahla zokunxiba ahlangana apha kule Comic-Con yabazinikeleyo be-UFO, ebandakanya izifundo kunye nomngcelele wabaphambukeli.
Ipaki yeSizwe kaJoshua Tree, eCalifornia
UJoshua Tree emi kwi-29 Palms Highway yaziwa ngokuba neendlela ezininzi eziphantsi komhlaba eziphantsi komxholo wezimbiwa ngaphandle kwesizathu. Ipaki kaZwelonke yayihlala kwimigodi engama-300 kwintlango yayo enkulu, kubandakanywa induli emhlophe yekristale emhlophe ngasemva kweGiant Rock. Kukholelwa ukuba sisiseko somphambukeli ngabaphandi abathile. Abalandeli be-UFO abaphonononga intlango apha bakholelwa ukuba uJoshua Tree uhlala kwi-33rd North parallel njengoRoswell. Yiyo loo nto inokuba ngu Indawo enkulu yokubona iUFO. Kwiminyaka emininzi, abaphandi be-UFO baye bahlangana apha ngeempelaveki ezinde zeentetho kunye neendibano zocweyo ezingachazwanga. Kuthathelwa ingqalelo iWoodstock yeUFOlogy, iimpelaveki zikhanyisela yonke into engachazwanga kwisayensi yeUFOs kunye nabaphambukeli bakudala ngemvelaphi yoluntu kunye nokuvezwa kukarhulumente.
I-Telescope ye-Aperture Spherical Telescope (FAST) yeemitha ezimakhulu mahlanu sesona sibonakude sikanomathotholo sikhulu nesona sinobuntununtunu ehlabathini. Ifumaneka kwindawo esemaphandleni kwiphondo lase-Guizhou lase China, i-FAST Radio Telescope, eyabona ukukhanya okokuqala ngo-2016, ikholelwa kubaphandi base China ukuba lolona khetho lulungileyo loluntu ukwenza imiyalezo evela esibhakabhakeni. Igama lesidlaliso iTianyan, elithetha "Iliso leSibhakabhaka" okanye "Iliso laseZulwini," ngabaseki balo, lafunyanwa lisombulula ezinye zeemfihlakalo ezinkulu kwindalo iphela. Omnye wemisebenzi yayo ephambili kukufumana imiqondiso yonxibelelwano kubaphambukeli. Ndwendwela lo mmangaliso mkhulu wesayensi kwaye ufumane ithuba lokubukela izazinzulu zisebenza kwezinye iiprojekthi ezinxulumene nomhlaba.
Wycliffe Kulungile, Australia
I-Wycliffe Well ibekwe ecaleni kwe-Stuart Highway kwi-Northern Territory yelizwe yaziwa njenge-capital ye-UFO yase-Australia. Ukubonwa kwe-UFO ngabantu balapha kuqheleke kangangokuba indawo leyo ibamba indibaniselwano ye-Wycliffe Well Holiday Park. Ingenye yeendawo ezi-5 eziphezulu zokubonwa kwamanye amazwe apho abahambi banokubhabha khona ukuze babukele ii-UFOs zisondeza, ngesiqhelo ekuqaleni kwexesha lonyaka elomileyo ukusuka ngoMeyi ukuya ku-Okthobha. Iingxelo zezinto ezingaziwayo zokubhabha zaqala ukuvela kule ndawo ukusukela ngeentsuku zeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Iindwendwe eziza apha zingathatha iiteleskopu zazo kwaye zihlale kwiikhabhathi eWycliffe Well Holiday Park. Abantu balapha babona izinto ezingaqhelekanga phantse yonke imihla ngemihla ngexesha le-"UFO".
ISan Clemente, eChile
Isixeko saseSan Clemente sithathwa njengesixeko esingabalulekanga se-UFO kwihlabathi. Ngokutsho kwabaphandi abasebenza apha, i-UFO ukubona i-average ye-UFO phantse iveki nganye. Kukho ukubonwa okuninzi kangangokuba iBhodi yezoKhenketho yaseChile yaseka i-UFO esemthethweni engama-30 km-ubude ngo-2008. Umzila uthatha abahambi kwiinduli ezibukekayo zeAndes ezigubungela iindawo ezohlukeneyo apho kuye kwaxelwa ukudibana okufutshane. Le ndawo likhaya leChibi laseColbún elinomxholo wamaminerali ophakamileyo ngaphandle komthombo (isandi esiqhelekileyo?). Umbono wokuma kwe-El Enladrillado, indawo enkulu ethe tyaba eyenziwe ngamabhanti angama-200 asikwe ngokugqibeleleyo ekukholelwa ukuba abekwa yimpucuko yakudala. I-theorists yelenqe kunye nabaphandi, nangona kunjalo, bakholelwa ukuba yindawo yokubambela indawo engaphaya komhlaba.
UJOHN DEEGAN uthi:
Oktobha 21, 2021 kwi-10: 38
Ndabona ubungqina kunye nomntu osebenza naye i-UFO ejikeleza phezu kwesityalo sekhemikhali eManchester ngo-5.50am ngenye intsasa yangoJulayi ngo-1999, ndandiza kusebenza eTrafford Park kwi-pushbike yam xa ndeva isandi sezityalo zekhemikhali ezikufutshane zihamba ngokukhawuleza. , xa ndijonga ngaphaya kwendlela kukho lo matshini ujikeleza phezu kwemibhobho yemichiza, ngokukhawuleza ndajoyinwa ngugxa wam owayekhwele ibhayisekile ukuya emsebenzini. Bekuthe cwaka ngelaxesha ingxolo inye ibiyi hooter, bekungekho ngxolo ye crafting ibingathi bapake up mid air bafaka ihand brake. Yayingengowalomhlaba, yasenza sobabini emva kwexesha kwishifti yethu ye-6am kumzi-mveliso endandiphonononga kuwo ngela xesha, ndaye ndaba likholwa lokuba sihanjelwa ngabangaphandle komhlaba, ndandiye kwintetho ngo-1994 malunga no I-Suffolk UFO enikwe nguCol. Charles Holt owayesakuba ngusekela-mphathi wesiseko somkhosi wase-Usa apho kwaye wabukela iinkqubo ezimbalwa ngalo mbandela ngaphambili. Kwaba nje likholwa elingumKrestu lamaKatolika apho ngoFebhurari ka-2016 ndadibana nento yokuba uYesu noMariya kunye nabanye abangcwele babonakala kumbono uVeronica e-Bayside USA (1970-94) phakathi kwezinye izinto abamxelela ngazo malunga nokuza kwenzeka. kumaxesha okugqibela esiphila kuwo yayikukuba ibinguSathana namahlakani akhe ababebhabhisa obu buchule bahlukahlukeneyo ehlabathini lonke ngenjongo yokuqhatha uluntu ukuba lukholelwe ukuba sihanjelwa zezinye iintlanga ezingekhoyo. Xa uXwilo lobuKristu lwenzeka endikholelwa ukuba liya kuba lixesha leshumi leendaba leendaba liya kuxela kwabo bashiywe ukuba kuxhwilwe ngabantu abaninzi ukuze kugqunywe umsitho kaThixo (iindaba zobuxoki ezingakumbi), oku kuya kubhengeza ngonyaka we-7. Ixesha lembandezelo oko kukuthi, xa uYesu ekhulula abakhweli bamahashe be-4, imfazwe iya kuqalwa yimikhosi edibeneyo yaseRashiya / i-China kunye ne-New York ibethwe yi-comet, ngokungakumbi malunga noku yiya kwiwebhusayithi ye-shrine. http://www.tldm.org uze ujonge phantsi kolwalathiso lwaloo mbandela. Ukubonakala kwabo eBayside kwaqinisekiswa yimimangaliso emininzi eyenziwa apho, nangona ibandla lingenakuze liyivume ngokusemthethweni, batsho apho ukuba uSathana wangena ebandleni ngoku kwinqanaba eliphezulu njengenxalenye yemfazwe yokomoya eqhubekayo, upopu wokugqibela Benedict.
Xa umboniso we-UFO & Consciousness weza eManchester ngo-2017 yenzeka ngaphaya kwendlela ukusuka apho ndandibone khona i-UFO ngo-1999, ndinikwe uhambo lwam lokholo andikholelwa ukuba le yayiyinto eyenzeka ngengozi. Bakhuthaza uluvo kumboniso wokuba sihanjelwa zizizwe zasemzini kunye nezinye zeethiyori zamayelenqe ezijikeleze oku. Kukho kwaye kukho amaxwebhu amaninzi kwi-tv ​​ngalo mbandela nawo akhuthaza lo mbono.
Ndineleta epapashwe kushicilelo lwehlabathi malunga nalo mbandela ngo-2018 kumthendeleko wokuNyuleka kweNtombi Enyulu uMariya.
Ke leyo yayiyimfihlakalo yam echaziweyo, uSathana kunye namahlakani akhe bangabantu abanamandla angaphezu kwawemvelo yiyo loo nto ibhayibhile isixelela ukuba asikho nxamnye nenyama negazi kodwa amandla kunye nolawulo. Yiyo loo nto umKristu enomthandazo / ukuzila ukutya njl njl kwindawo yabo yezixhobo zomoya, esebenza ngokuchasene nemisebenzi yakhe.